‘सेक्स’ को कुनै उमेर हद् हुदैन ? - Nayabulanda.com
एजेन्सी १८ आश्विन २०७५, बिहीबार २२:५९ 698 पटक हेरिएको
नयाँ दिल्ली : आयुष्मान खुराना फिल्म ‘वधाई हो’ मा आफ्ना बाबुआमाको सेक्स जीवन अझै क्रियाशिल छ भन्ने मान्न तयार छैनन् । फिल्मको एक दृश्यमा खुराना भन्छन् ‘यो पनि काहीँ बाबुआमाले गर्ने कुरा हो ।’
हास्यरसले भरिएको यो दृश्यले दर्शकलाई हसाउने काम मात्र गरेको छैन, यसले युवा पुस्तामा ‘बाबुआमा ४०÷५० वर्षको उमेरमा कसरी सेक्स गर्न सक्छन् ?’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यो फिल्मले युवाहरूका मनमा सेक्सका वारे नयाँ बहस चलाएको छ ।
धेरैजसो युवाहरू एक समयपछि भाई÷बहिनी जन्मिनुलाई अचम्म मान्दछन्, त्यही केही युवाहरू यसलाई सामान्य मान्ने पनि छन् । तर प्रश्न के उठछ भने आधुनिक विचार राख्ने युवा पुस्ता आफ्नो अभिभावकको सेक्स जीवनमा किन यति संकिर्ण छन् ?
जवाफमा कलेजका विद्यार्थी मनोज गौंड भन्छन् ‘तपाई नै सोच्नोस त, यति ठूलो भइसकेपछि जहाँ भाउजु सुत्केरी भएका, साथीहरुले बच्चा जन्माएकोे समाचार आइरहेको हुन्छ, त्यँही आमा गर्भवती भएकी छन्, भन्दा कस्तो लाग्छ ?’
त्यसो भए के उमेर ढल्कदाँ सेक्स पावर घट्दैन ? यसको उत्तरमा डा. कोठारी भन्छन् ‘सेक्सका लागि ७० प्रतिशत असर तपाईको मानसिकताको पर्दछ ।
यसमा यदी कुनै बृद्धले सोच्यो की अहिले म जवान छु, तब उसको त्रियाशिलता राम्रो हुन्छ । त्यही यदी कुनै जवान मानिसले आफू बुढो भएको सोच्छ भने उसको सेक्स परफर्मेन्स घट्छ । तर, ३०/४० प्रतिशत असर तपाइको दिमागी स्थिति, तपाईको हार्मोनको स्थितिमा पनि निर्भर हुन्छ । तर, हर्मोनजस्ता समस्याका समाधान खानपिनले पनि गर्न सक्छ । रक्त सञ्चार कम भए भियाग्राको साहारा पनि लिन सकिन्छ ।’
त्यसकारण यसको अर्थ हो कुनै पनि उमेरमा सन्तान सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ ? डा. कोठारी भन्छन् ‘जहाँसम्म सन्तान पाउने उमेरको कुरा छ, पुरुष ९० वर्षको उमेरसम्म बाबु बन्न सक्छन् । तर महिला त्यतिबेलासम्म आमा बन्न सक्छिन् जबसम्म उनको महिनावारी चल्छ । आमरुपमा यो उमेर ४०/५० वर्षको हुन्छ ।’